U fiirso Guurkaada (Maqaal Muhiim ah)
Subject: U fiirso Guurkaada (Maqaal Muhiim ah) Wed Jun 30, 2010 10:00 pm
Guurku waxa uu qeyb ka yahay waxyaabaha hormarka aadmiga ka qaato qeybta ugu wayn, oo hadii uusan guur jiri laheen, aadmiga maba tarmeen ilaa laga soo bilaawo xiligii Nebi Adam (CS) ilaa haatan door muhiim ah ayuu ka qaataa jiritaanka aadmiga.
Dhanka kale waxaanu wada ogsoon nahay in bulsho yar aysan gaari Karin hor mar wax barasho, ciidan, dhaqaalebo iyo kuwo kale oo muhiim ah. Dal walbo tirade dadkiisa iyo waxqabadkooda ayaa gaarsiiso in uu gaaro hor mar inta kale tiigsadaan, bulshada badan ayuu hormar ku jiraa ee wax isla wada qabsaneyso u jeedkooduna yahay hal.
Sideedabo guurku waxa uu abuuraa qoys, qoyskuna waxuu kordhiyaa bulshada, kororka bulshadane waxa ay qeyb ka qaadataa il’baxnimada iyo xadaaradahooda oo waxa ay noqdaan dad dhinac walba ka dhisan. Hadii ay helaan barnaamijyo hormarineed.
Waaydan dambe waxaa soo batay guurka lagu deg dego furiin aanba saa uga sii dambeyn oo dabo socdo, horaa loo yiri (geedkii orad lagu koraa orad ayaa looga soo degaa) waaba hadii aanan bootin looga soo deign! Taas oo dhaqan u ahayn Soomaalidii hore. Soomaalidii hore guurka waa ay ka fiirsan jireen oo reerka inanta dhalayna laga doonan jirey gogol geed hoostiisa la dhigan jiray laguna soo dhibi jiray sidaa daraadeedna ma sahlaneyn inanta intaa laga soo maray sahal in lagu furo, waxuuna ahaa furiinku bari samaadkii mid dhif iyo naadir ah.
Waxa waayadan dambe sida badankeen la socdo la arkaa aroos deg deg ah iyo furiin isdabo yaal oo kaba fudud arooskii, waxaa la yiri “hadal aan fiirso loo oran iyo caano aan fiiqsi loo dhamin, feerahaada ayey wax yeeleeyaan.” Furiinkaas deg dega ah ayaa sabab looga dhigaa guurka oo lagu fududaado iyo waliba mararka qaarkood ayadoon waalidka la tix galin.
Guurka sidoo kale waxa uu daawo u yahay dhibaatooyin badan oo heysto dhalinta aan guursan, guurka waa xasiloonida maskaxda waa qofkii u fiirsado guurkiisa waxuuna ka helaa lamaane la wadaago dhamaan wax yaabaha nolosha la xariiro sida dheefta, dhibaatada, faraxada, murugada, macmacaanka nolosha iyo qaraarka nolosha.
Ruuxna ma dareemo dhameystirnaan ilaa uu ka baxo katiinada ku jabsan ee uu kula xeran qolka baaxada wayn ee doobnimada, nolosha raaxadeeda ma arkin ilaa aad ka gasho guur xalaal ah, mana dhadhamin miraha jaceylka ilaa aad ka xarooto dhaxanta lana hoyato lamaanahaadii aad galgaceylka u haaysay.
Marka labadiinii jaceyl wadaaga aheed is guursataan aadna gashaan gogol ku dhisan kalsooni iyo is aaminaad waxaa shaki la’aan ah in lamaanahaas ay galayaan nolol xasilan oo aad u macaan loona aayo ciribteeda dambe adinka oo ku dadaalaayo Alle ka cabsi (waxuu Alle farayne la fartoonaado waxii kaa reebayne laga reebtoonaado.) gaar ahaan lamaanaha is doortay ku dadaalaan in ay ka dheeraadaan waxii gurigooda dumin karo.
Kheyraadka (Nimcada) iyo faa’idooyinka guurka ma ahan wax lagu soo koobi karo qoraal, balse waa qodob u baahan in wax laga iftiimiyo dhamaan shacabka daaha looga rogo qiimaha uu guurka u leeyahay bulshada iyo waliba siyaabaha loo ilaalin karo Mas’uuliyada iyo sida ugu haboon ee aad ku xulan karto lamaanahaaga aad nolosha la wadaagi doonto mustaqbalkaaga, intii Alle naga waafajiyo.
Guurka waa furaha qasnada ubax (ubad) xalaal laga helo waa habka taranka aadaniga ku farcamo waa hubka lagula dagaalamo kalinimada iyo sinada, oo anaga oo dhan aqristow ma jireen hadii uusan guur jirin, waxaana sabab u ah kana ahaaney jiritaankeena xalaal oo Alle (SWT) u jideeyay oo ay waalidiinteena (hooyo iyo aabe) isla galeen.
Dhanka kale hadii bulshadu ka haboowdo aqlaaqda guurka waxaa qalibmaayo asluubtooda oo dhan waxaan yaranaayo tarankooda iyo helida owlaad xalaal ah sidaa daraadeed waxa la gudboon ruux walbo oo guur doon ah gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaliyeed in ay u fiirsadan (fikiraan) guurkooda oo aan lagu deg degin.
Erayga guur hadii aan si fiican u eegno waxaan ka soo dhex saari karnaa in uu ka kooban yahay saddex eray oo lays ku daray kuwaas oo kala noqonaayo hadii aad si fiican ugu fiirsato Gu, Guur iyo Uur.
1-(Gu’) waxa uu leeyahay labo micno oo kale ah (A) gu’ oo ah xiliga roobaadka barwaaqada ah oo waxaa ku micneyn karnaa guurka waa sida gu’ oo kale. (B) Gu’ waxaa lagu fasiri karaa sidoo kale waa cusub oo u curtay labo qof ee markaa is guursada.
2-(Guur) waxa uu la mid yahay sida labo qof oo isguursada uga soo guuraan deegaankii horay u joogeen, una guuraan deegaan cusub sidaa daraadeed waa ay soo guureen.
3-Erayga saddexaad oo aan ka soo dhex saari karno waa (Uur) uurkuna waa muhiimada koowaad ee labada qofood isku guursadeen, waana farxadda koowaad ee labada isguursadey, waxa ayna muujinaysaa wax soo saar wanaagsan oo sida badan gabadha marka la guursado waxa ugu horeeyo oo laga sugaayo waa in ay uur yeelato, marka ay ilmo u dhashaan qoyskaas waxaa u baryo waa ka sii wanaagsan farxad iyo rayn rayn ayey iskula caweeyaan.
Guurka oo ah shay aad u qaali ah una sabab ah jiritaan Aadmiga, waxaa jideeyey una soo dejiyey aadanaha Allaah (SWT) Allena waxa uu ka leeyahay ujeedooyin badan kuwaas oo gabi ahaantoodba faa’ido badan u leh Aadanaha.
Ujeedooyinka ugu waa wayn ee aan ka soo qaadan karno waxaa ka mid ah; Taranka aadmiga oo guurka waxaa laga helaa oowalaad. Ubudkuna waxa ay badiyaan qoyska, qoyskuna waxa uu badiyaa bulshooyinka, bulashaduna marka ay bataan waxaa bata amaba kordha il baxnimada iyo xadaarada aadamiga ama bulshooyinkaas.
Guurka waa xikmad rabaani ah bal u fiirso Allaah (SWT) isaga ayaa abuuray koonkaan iyo bini aadamakaba Nebi Aadam (CS) waxaa abuuray Allah (SWT) waxuuna ka abuuray Dhoobo sida ka muuqato magaca Aadam oo la mid ah (Dhoobo), Xaawane Alle waxa uu ka abuuray Feertii Nebi Aadam (CS) sidaas oo kale ayuu awoodaa in uu qofkastaa siiyo rag iyo dumarba inta ubad uu doono iyagoon waliba is guursan dhib iyo shidane marin.
Hadane iyadoo oo Alle Dumarka sabab uga dhigay dhalida caruurta dadka iyagu ilmaha iskama dhalaan ee Alle aya siiya ilmo ruuxa uu doono intii uu u qorey, Allah awoodiisa ayuu ku siiyaa ruuxa uu doono wiilal, gabdho amo waa uu iskugu daraa labadaba hadii uu doonane waxa uu ka dhigaa Ma dhaleys Allah ayaan ka baryeynaa in uusan naga dhigin Madhaleys (SWT). Bal u fiirso Allaah awoodiisa waxaa la arkaa dadka imisa ayaa maalin walba midoowda guur, imisa qoys ayuu guur isu keenay, is baray isna dhex galiyey, kana dhigay bulsho meel degan.